Madaxweynaha oo baaq u diray siyaasiyiinta | Star FM
Home Wararka Kenya Madaxweynaha oo baaq u diray siyaasiyiinta
Madaxweynaha oo baaq u diray siyaasiyiinta
Madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta ayaa hoggaamiyaasha siyaasadeed ugu baaqay in ay shacabka u noqdaan tusaale wanaagsan oo ayna raacaan talooyinka caafimaad iyo amarrada dowladda ee lagu xakameynayo faafitaanka cudurka COVID-19.
Arrinkan ayuu shaaca ka qaaday ka dib kulan wada tashi ah oo uu la yeeshay madaxda siyaasadeed ee dalka.
Waxaa shirka ka qayb galay mas’uuliyiin ay ka mid yihiin hoggaamiyaasha xisbiyada ODM, ANC ,KANU, Ford-Kenya, NARC iyo Wiper.
Madaxda ayaa walaac ka muujiyay kiisaska cudurka ee ku sii kordhaya wadanka iyo in aynan bukaanada ku filnayn sariiraha yaalla qaybaha daryeelka degdegga ee ICU-da.
Previous articleSoomaaliya iyo Qatar oo sii xoojinaya xiriirkooda
Next articleDHAGEYSO:Biyo la’aan saameysay Lagdera